Muxuu Yahay Sumadda Bannaanka Ugu Caansan Adduunka?
Arc 'Teryx （Kanada): Sumadda ugu sarreysa bannaanka ee Kanada, oo lagu aasaasay VANCOUVER, Kanada 1989, xarunteeda, istuudiyaha naqshadeynta, iyo khadka wax soo saarka ugu weyn weli waxay ku taal Vancouver. Baadhitaankeeda ugu waalan ee farsamooyin cusub iyo tiknoolajiyad cusub, in ka badan toban sano, waxay ku kortay aqoonsi ...
Covid-19 Wuxuu Ku Keenay Saameyn Weyn Iyo Tijaabo Warshadaha Caalamiga ah ee Tafaariiqda
Qeybtii ugu horeysay ee 2020, si lama filaan ah ayuu u qarxay coVID-19 wuxuu saarey warshadaha tafaariiqda adduunka, oo ay ku jiraan warshadaha dharka, saameyn weyn iyo tijaabin. Marka loo eego hoggaanka adag ee Golaha Dhexe ee CPC, xaaladda ka hortagga iyo xakameynta cudurrada ee Shiinaha ayaa sii waday inay soo hagaagto, ...
Bixida xilliga qaboobaha, deegaanno kala duwan, waqtiyo kala duwan, waddooyin kala duwan, da 'kala duwan, xulashooyinka dharka dibadda ayaa ka duwan. Marka sidee ku dooran kartaa? 1. Baro sedexdaan mabda 'Gudihiisa ilaa dibadiisa, waa: lakabka dhididka-lakabka kuleylka-lakabka dabaysha. Guud ahaan, s ...
Ka mid yahay shirkadaha ganacsiga ee Shiinaha, oo ku takhasusay dharka in ka badan 10 sano. Wax soo saarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Jaakada, Parka, Waistcoats, Surwaal, Gaagaab, Guud ahaan, dhammaan noocyada dharka roobka, sida Raincoat, Rain poncho. Sidoo kale suufka jilibka, suufka curcurka, tuwaallo dhaqso u qalajinaya, caag la qaadan karo ...